TinyCal -Khalenda kaGoogle kunye neApple yeMac | Iplum iyamangalisa
Asanda: 3 / 11 / 20
Ukufikelela ngokulula kunye nokujonga kweGoogle okanye iKhalenda ye-Apple, ngqo kwi-menubar. Yongeza imicimbi, izikhumbuzo, ukhetho oluninzi. Inokubonisa iinyanga ezininzi, isebenzise iikhalenda zesiko, bonisa iiholide ezivela kumazwe amaninzi kunye neekhalenda ezininzi zobuqu / zeshishini.
I-TinyCal ineempawu ezininzi eziluncedo.
Ikhalenda yeApple jonga kwangoko ikhalenda encinci kunye nokufikelela kwi-Mac yemenyu
IKhalenda kaGoogle jonga kwangoko ikhalenda encinci kunye nokufikelela kwi-Mac yemenyu
Inkxaso kwiiGadi zeKhalenda zikaGoogle
Umdibaniso oqwalaselweyo wenyanga
Umcimbi woqwalaselo olungiselelwe
Yenza ucime imicimbi
I-ISO 8601 iinombolo zeveki
Ukugqunywe kwikhalenda yesibini
I-TinyCal ifuna iMac OS X 10.9 okanye kamva. Umdibaniso weKhalenda kaGoogle unikezwe nguGoogle.
Ukubonisa iinyanga ezininzi
I-TinyCal inokwenziwa ngokwezifiso ukubonisa i-1, 2, 3 okanye iinyanga ezili-12 ngexesha elinye. Umboniso unokucwangciswa umde okanye ubanzi.
I-TinyCal inokubonisa iiKhalenda zikaGoogle zikawonke wonke zeholide zamazwe angama-40 ahlukeneyo, ukusuka e-Australia ukuya eVietnam. Ikwanokubonisa iminyhadala kwiKhalenda yakho kaGoogle. Le skrini ilandelayo ibonisa iiholide ezivela e-USA ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nekhalenda ebomvu ebomvu.
I-TinyCal inokwenziwa ngokwezifiso ukubonisa ezinye ikhalenda, ezinje ngeBuddhist, isiHebhere, isiSilamsi, kunye nesiJapan. Le skrini ilandelayo ibonisa ikhalenda yesiHebhere eneholide yamaYuda.
Iwindow yeTinyCal yimenyu yokuqhekeza enokuphinda ibekwe naphi na kwiscreen.
Kwiwindow yeTinyCal, umhla wanamhlanje ujikelezwe. Ukongeza, ukuba kukho naziphi na iziganeko ezenzekayo namhlanje, ziyabonakaliswa kwi icon yemenyu yemenu. Kule skrini ilandelayo, unxantathu oluhlaza okwesibhakabhaka osezantsi ngasekunene kubonisa ukuba kukho umsitho namhlanje.
Ulawulo olusisiseko lubonisiwe kwisikrini esingezantsi.
- Ikhalenda yeapile ayibonisi abanye abasebenzisi. ilungisiwe.
-kwenza ukuba kube nzima ukusebenza ngexesha
-izilungiso kule ncwadana
-ilungisa umboniso wenyanga kwikhalenda elincinci kwimodi emnyama.
-Imvume eziphuculweyo zokufikelela kwiGoogle kunye neekhalenda zeapile
-ukuboniswa kwedatha ubukhulu becala lekhalenda
-isebenza ngokugqibeleleyo kwi-mojave mac os 10.14
-okulungiswa kwimodi emnyama
-ukubala. Utshintsho lokoneliseka kukhuseleko olutsha lweapile
-dibanisa umbandela ulungisiwe
-i-tweak encinci yokwenza ukhangelo lomsebenzi wokuhlaziya kwaye ukwazi ukuseta ixesha lokujonga, imihla ngemihla, ngeveki okanye ngenyanga.
-Khangela uhlaziyo (sparkle) ngoku luyasebenza. unokuseta ixesha lokuphumla. kwesi isihlandlo sokuqala unokufuna ukukhuphela ngesandla.
- ukulungisa iibhagi
-ilungisa ukungqubana ekukhetheni ikhalenda yeapile.
-ngoku ixhasa iKhalenda ye-Apple! Khetha nokuba yi-Apple okanye ikhalenda kaGoogle kwiimfuno.
-ngezwe kwikhalenda eyongezelelweyo yeKhalenda kaGoogle. kubandakanya ikhalenda yesizwe, eyenkolo, yezemidlalo kunye neekhalenda ze-misc. iluncedo kakhulu
-iinguqu ezininzi ezincinci kunye nokuphuculwa.
enkosi kubo bonke abasebenzisi ngeengcebiso zakho kunye nokulungiswa kwe-bug! iyanceda ukuvela kwezinto.
-Ukuphuculwa kokungena kwikhalenda kaGoogle
-Umxholo we icon kunye ne-retina show esisigxina
-ihleliwe malunga nekhonkco lengxoxo yebhokisi
- Ithanda ngoku evulekileyo nakweyiphi na indawo nokuba ukhetha sele ivuliwe kwenye indawo
- iinguqu ezingakumbi ukongeza kolu tshintsho izolo
-ingoku ngoku idityanisiwe kwaye kusetyenziswe iGoogle ngoku
-dityaniswe nge-xcode yamva nje.
Yenza umnyhadala womcimbi ulungisiwe.
-inguqulelo ngoku ze-shareware (kwivenkile emangalisayo ye-plum) kunye nevenkile yeapile (xa begqibile ukuphononongwa).
Incwadana yemigaqo yeTinyCal